Ukuphathwa kwesilimo se-Cantaloupe
Kuhle ngaso sonke isikhathi ukushintshanisa ama-antaloupes nezinye izitshalo ezifana nokusandumba noma izitshalo ezinamaqabunga. Zama ukutshala i-cantaloupes njalo eminyakeni emibili endaweni efanayo. Uma leyo ndawo kufanele itshalwe nge-cantaloupes njalo ngonyaka, ukulawulwa kwezinambuzane ezikhathazayo ezinamandla kakhulu kanye nokufafazwa kwenhlabathi kufanele kwenziwe.
Isivuno - amathani ngehektha ngalinye
Isilinganiso esiphansi: amathani angu-15
Isilinganiso sangaphakathi: amathani angu-30
Kuhle: amathani angu-40+
Ukuvuna kuqala cishe amasonto ayishumi nambili emva kokutshala kwezithombo noma ukuvela kwezitshalo lapho kwenziwa imbewu ecacile. Ukuvuna kwenziwa ngesandla futhi kungaqhubeka amasonto amathathu kuya kwamane. Ukuvuna kwenziwa ezinyathelweni ezihlukahlukene ze "slip" ngokuvamile evame ukubizwa ngokuthi "slip esigcwele" nesigamu sehafu.
Lokhu kubhekisela ekutheni kalula ikhabe ingasuswa kanjani esiteshini. Amanoni okudayiswa kanye nokusetshenziswa okusheshayo avunwa ngokugcwele lapho ubhece uvuthiwe ngokuphelele. Lokhu kufanele kudayiswe ngokushesha. Izithelo ezivuna ngesigamu sezivuthiwe futhi zingasetshenziswa ukugcina nokuthengiswa kamuva.
I-Cantaloupe noma i-Muskmelon yingozi kakhulu ngakho sinzima ukugccina. Isitoreji ngokuvamile siphakathi kuka-2 kuya ku-4°C. Umswakama ohlobene nawo kufanele ube ngu-90%+. Isitoreji akufanele isikhathi esingaphezu kwezinsuku ezingu-14. Ezinye izinhlobo ezintsha ezivunwa ngesigamu zingagcinwa ku-0 kuya ku-2°C kuze kube amasonto amane. Ubhece wokunambitheka ongcono kakhulu usuke ivuthwe uvuthwe futhi udliwe ngemuva kokuvuna ngangokunokwenzeka.
Ama-Nematodes, i-American Bollworm, i-Aphid nobhungane.
I-Downey Mildew, i-Anthracnose, i-Powdery Mildew, i-Fusarium, igciwane le-Mosaic, i-bacterial wilt ne-Leaf spot.